एमालेले कात्तिक २७ गते यसरी छानिँदै छन प्रतिनिधि !
November 3, 2021 N88LeaveaComment on एमालेले कात्तिक २७ गते यसरी छानिँदै छन प्रतिनिधि !
काठमाडौं । नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि यही २७ कात्तिकमा एकै दिन छानिँदै छन् । एमाले प्रचार विभागले १०औँ महाधिवेशनका विषयमा जानकारी दिन बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको जानकारीअनुसार २७ कात्तिकमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछ । निर्वाचनमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन यसरी गरिनेछ […]
लोकल रक्सी झैं विदेसी रक्सी पोखेर देखाउ – नेतृ उषाकला राई
November 3, 2021 N88LeaveaComment on लोकल रक्सी झैं विदेसी रक्सी पोखेर देखाउ – नेतृ उषाकला राई
खोटाङ । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानमा लोकल मदिरा पोखाएर नष्ट गरेको घटनाप्रति ‘व्यान्ड भर्सेस ब्राण्ड’की अभियान्ता एवं पुर्वमन्त्री उषाकला राईले विरोध जनाएकी छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय हलेसीका प्रहरी निरिक्षक प्रमोद कार्की नेतृत्वको प्रहरीले १५ कात्तिकमा ८० लिटर मदिरा र २०० लिटर कच्चा पदार्थ वरामद गरेर जनप्रतिनिधि, दलका प्रतिनिधि र स्थानीयको रोहवरमा पोखेर नष्ट […]
यस्ता छन् प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिनुको १२ कारण
November 3, 2021 N88LeaveaComment on यस्ता छन् प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिनुको १२ कारण
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले सडकले माग्दैमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिन्न भन्नु राजनीतिक अभिव्यक्ति आरोप लगाएका छन् । बारले बुधबार आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा पूर्वउपाध्यक्ष भट्टराईले दिएको मन्तव्यः सडकले माग्दैमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिन्न भन्नु राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । चुनाव जितेर आउने हुनाले राजनीतिज्ञले राजीनामा दिन्न भन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश त […]
नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई गाडी बुझाएर पैदलै हिँडेर डेरा फर्किए महेन्द्रबहादुर !
November 3, 2021 November 3, 2021 N88LeaveaComment on नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई गाडी बुझाएर पैदलै हिँडेर डेरा फर्किए महेन्द्रबहादुर !
काठमाडौं । मंगलबार साँझ साढे ८ बजे कर्णालीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिए । शपथ ग्रहण कार्यक्रमको दृश्य भने रोचक थियो । कार्यक्रम सञ्चालकले नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिन अतिथिहरुलाई सुझाएपछि प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनी, सभामुख राजबहादुर शाहीले सुरुमा बधाई दिए । त्यसपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले खादा ओडाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीसँग […]
भाईटीकाको चलनअघि दाजुभाई-दिदीबहिनीबीच यौ’न सम्बन्ध हुन्थ्यो
November 3, 2021 November 3, 2021 N88LeaveaComment on भाईटीकाको चलनअघि दाजुभाई-दिदीबहिनीबीच यौ’न सम्बन्ध हुन्थ्यो
काठमाडाैं । वरिष्ठ संस्कृतिविद् तथा इतिहासकार डा .जगमान गुरुङले भाइटीका अघि दाजुभाई, दिदी बहिनीबीच नै यौ’न सम्पर्क हुने गरेको बताउनु भएको छ । तिहारको बिषयमा एक अनलाइनका लागि बिनु सुवेदीसँगको लामो अन्तरवार्तामा गुरुङले यस्तो तथ्य खोल्नुभएको हो । तिहारको पाँच दिन र भाइटीकाको बिषयमा डा गुरुङको भनाई यस्तो छ तिहार हाम्रो एउटा चाड हो । […]
अब हुने चुनावमा एमालेलाई कुचो लगाएर बढार्ने हो – गगन थापा
November 3, 2021 N88LeaveaComment on अब हुने चुनावमा एमालेलाई कुचो लगाएर बढार्ने हो – गगन थापा
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले अब हुने चुनावमा नेकपा एमालेलाई हराउनुपर्ने बताएका छन्। भक्तपुरको सूर्यबिनायक नगरपालिका वडा नम्बर ७ गुण्डुमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले एमालेलाई स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा अब हुने चुनावमा हराउनुपर्ने बताए। ‘यसपटकको चुनावमा नेकपा एमालेलाई कुचो लगाएर बढार्ने हो। बढार्दा कुनाकाप्चामा धुलो अड्कियो भने भ्याकुम लगाउने हो,’ […]